အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ပညာရှင်များအသင်းမှ 34th ASC ဆုပေးပွဲအတွက် Honore ရရှိသူလေး ဦး ကိုအမည်ပေးသည် - Broadcast Beat မှ NAB Show News, NAB Show ၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်သူ - NAB Show LIVE
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ပညာရှင်အသင်းက 34th ASC ဆုများအတွက် Honoree လက်ခံရရှိသူလေး ဦး ကိုအမည်ပေးခဲ့သည်
အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ပညာရှင်အသင်းက 34th ASC ဆုများအတွက် Honoree လက်ခံရရှိသူလေး ဦး ကိုအမည်ပေးခဲ့သည်
အဆိုပါ ရိုက်ကူးရေး၏ American Society (ASC) သည် 34 တွင်ရိုက်ကူးထားသောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူလေး ဦး ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဂုဏ်ပြုလိမ့်မည်th ထူးချွန်အောင်မြင်မှုအတွက် ASC ဆုများ။ Frederick Elmes, ASC သည် Lifetime Achievement Award၊ Donald A. Morgan, ASC သည်ရုပ်မြင်သံကြားရုပ်မြင်သံကြားဆုအတွက်အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အတူဂုဏ်ပြုခံရလိမ့်မည်။ Bruno Delbonnel, ASC, AFC သည်နိုင်ငံတကာဆုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နှင့် Don McCuaig, ASC သည် Presidents ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းကိုဇန်နဝါရီလ 25, 2020၊ Ray Dolby Ballroom ရှိ ASC ဆုပြိုင်ပွဲမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ် & အဘိဓါန် Highland ။
ASC ဥက္ကPresident္ဌ Kees van Oostrum က“ ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဆက်လက်အလုပ်အကိုင်တွေအတွက်ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့အမွေအနှစ်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံရိပ်တွေ၊ ရွယ်တူချင်းတွေနဲ့ထွန်းသစ်စရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာဒီအထူးဆုတွေနဲ့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
အဲလ်မီသည်အမြော်အမြင်ရှိရှိရုပ်ရှင်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏ရှည်လျားသောအလုပ်အကိုင်သည် David Lynch ကဲ့သို့သောရှေ့ဆောင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည် (နှလုံးမှာရိုင်း Eraserhead, အပြာရောင်ကတ္တီပါ) နှင့် John Cassavetes (တရုတ်စာအုပ်စာအုပ်၏သေခြင်း, ဖွင့်ပွဲည) ။ သူ၏ထူးခြားသောရုပ်ရှင်များတွင်ဒါရိုက်တာ Ang Lee အတွက်ရုပ်ရှင်များစွာပါဝင်သည်။Ice Storm၊ စာတန်နှင့်အတူစီးနင်းလိုက်ပါ) နှင့်ဂျင်မ် Jarmusch (ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိည၊ ကော်ဖီနှင့်စီးကရက်၊ Broken ပန်းပွင့်၊) ။ အခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှာ Bill Condon (Kinsey), ချာလီ Kaufman (Synecdoche, နယူးယောက်) Mira Nair (အဆိုပါ Namesake) နှင့် Jim Sheridan (ညီအစျကို) ။ အဲလ်မီသည်လွတ်လပ်သော ၀ ိညာဉ်ဆုများရရှိခဲ့သည် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ညဥ့် နှင့် နှလုံးမှာရိုင်းနှင့်များအတွက်တတိယအမည်စာရင်းတင်သွင်းရရှိခဲ့သည် အပြာရောင်ကတ္တီပါ.
Elmes သည်နာမည်ကြီးရုပ်မြင်သံကြားစီမံကိန်းများကိုလည်းရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Emmy ကိုသူ့အလုပ်အတွက်လက်ခံခဲ့သည် ညစတိဗ် Zaillian ကရေးသားနှင့်ညွှန်ကြား HBO miniseries နှင့်များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်း အဆိုပါ Gloaming ၌တည်၏။ သူ၏တီဗီဆုများတွင် Emmy ဆုရ HBO ကန့်သတ်ထားသောစီးရီးများပါဝင်သည် သံလွင် Kitteridge, Lisa ကို Cholodenko ညွှန်ကြားအဖြစ် multi- အမည်စာရင်းတင်သွင်း ရက်ကန်းစင်မျှော်စင်Hulu / Legendary Television မှထုတ်လုပ်သောအသေးစားစီးရီး။ သူ၏လက်ရှိလက်ရာများမှာ Bennett Miller မှခေါင်းစဉ်မရှိသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်သည် သခင်ယေရှု RollsJohn Turturro မှရိုက်ကူးသောဒါရိုက်တာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Morgan သည် 10 အချိန် Primetime Emmy ဆုရှင်ဖြစ်ပြီးသူ၏ထံမှအထင်ကြီးစရာကောင်းသော 17 အမည်စာရင်းများရရှိသည် ရုပ်မြင်သံကြားအကယ်ဒမီမှာရွယ်တူချင်းများ။ Morgan ၏ Emmy အနိုင်ရ ABC ဟာသအတွက်ခုနစ်ခုပါဝင်သည် မူလစာမျက်နှာတိုးတက်မှုNetflix စီးရီးနှစ်ခု အဆိုပါ Ranchနှင့်သူ၏အလုပ်အပေါ်ရုပ်ထု Mr. Belvedere ၎င်းသည် 1985 ရှိ ASC George Spiro Dibie နှင့်မျှဝေခဲ့သည်။ သူ၏အမည်စာရင်းသည်စီးရီးအပေါ်သူ၏အလုပ်ကိုဂုဏ်ပြုသော 35 တွင်အငြိမ်းစား Bagdad ကော်ဖီ၊ မိန်းကလေးများ၊ ဖောင်းပွခြင်းမှကယ်တင်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းတိုးတက်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးလူသား၏ရပ်တည်မှု နှင့် အဆိုပါ Ranch.
သူ၏အောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတွင် Morgan သည် 130 ခရက်ဒစ်နီးပါးကို cinematographer အဖြစ်ခိုင်းခဲ့သည်။ မိန်းမကလေး (171), ကြှနျတေျာ့ဇနီးနှင့်ကလေးများ (114), မူလစာမျက်နှာတိုးတက်မှု (190) နှင့် နောက်ဆုံးက Man အမြဲတမ်း (150) ။ Morgan လည်းလေယာဉ်မှူးများစွာကိုလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သည် ကလိဗ်လန်၌ပူ, Moesha, 227, Reba၊ ဂရက်ဂိုရီဟင်းစင်းပြ၊ တောင်ပိုင်းဗဟို၊ နန်နီ၊ ကမ္ဘာကြီးကိုပြည့်ပြည့် ၀၀ ဖြည့်ဆည်းနိုင်သူ၊ မစ္စတာဘယ်ဗဲဒီးရား၊ The Golden Girls၊ Soul Man၊ Tracy Morgan Show, အိမ်မှာစစ်ပွဲ, Rita ကျောက်ဆောင်, မြေညီထပ်နှင့် အဆိုပါ Cool ကလေးများ။ Episode TV အပြင် Morgan သည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ NAACP's Image Awards အတွက်ရုပ်သံနှင့်အထူးအစီအစဉ်များကိုရိုက်ကူးခဲ့သည်။ Morgan သည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအစတွင်မတူကွဲပြားသောအမှုထမ်းများပါ ၀ င်ရန်တွန်းအားပေးခြင်းကြောင့်လူသိများခဲ့ပြီးလက်ရှိ IATSE Local 600 ရှိမတူကွဲပြားခြင်းဥက္ကChairman္ဌနှင့် ASC Vision Committee ၏အသင်း ၀ င်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန်အခြားသူများကိုလှုံ့ဆော်သည်။
Delbonnel သည်အော်စကာဆုအတွက်ငါးကြိမ်ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်သူဖြစ်သည် Llewyn Davis၊ Harry Potter နှင့်အသွေးတော်တစ်ဝက်မှောင်မိုက်အတွင်းမှောင်မိုက်ဆုံးအချိန်။ နှင့် Amélie။ သူသည် ASC၊ BAFTA၊ Camerimage၊ ဥရောပရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိရုပ်ရှင်ရုံအနုပညာနှင့်နည်းပညာများနှင့်ဝေဖန်သူများအသင်းများထံမှချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုများရရှိခဲ့သည်။ သူသည်အတွေးအခေါ်ပညာကိုမကူးပြောင်းမီလေ့လာခဲ့သည် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး နှင့်လည်းပါဝင်သည်သောအလုပ်တစ်ခု indelible ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခဲ့သည် Buster Scruggs ၏သီချင်း, Francofonia, Big Eyes, မှောင်မိုက်အရိပ်, Faust, နှင့် စကြဝဠာအနှံ့။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်သည် Delbonnel ကို Pierre Angénieux ExcelLens ရုပ်ရှင်ရုံဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ရုံများသို့လာမည့်သူ၏နောက်ထပ်စီမံကိန်းများလည်းပါဝင်သည် ပြတင်းပေါက်ကအမျိုးသမီး ဂျိုး Wright နှင့်ရှိတ်စပီးယား၏ Macbeth ၏ Joel Coen ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။
McCuaig သည်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်သောဝါရင့်ရုပ်ရှင်ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူ၌ 75 ကျော်ရှိသည် ဇာတ်ကြောင်းတီဗီခရက်ဒစ်နှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအင်္ဂါရပ်များအပေါ်ဒုတိယယူနစ်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ သူသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးကြာအောင်ဒုတိယယူနစ်အရင်းအမြစ်များကိုထောက်ပံ့ရန်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာစတင်ခဲ့သည် အား NBC on အန်ဒီဝီလျံပြပွဲ စင်ကာပူဌာန၊ ABC ရုပ်မြင်သံကြားမှာအီလက်ထရောနစ်ထုတ်လွှင့်မှုကိုကူးပြောင်းခြင်း၊ CBC နှင့် Montreal အိုလံပစ်အတွက်အားကစားသတင်း photojournalist မဖြစ်မီ၊ သူကထိုကဲ့သို့သောနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည် ဟောလိဝုဒ် တီနမ်အကယ်ဒမီ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်သူ Dinah Shore, Bob Hope နှင့် Perry Como တို့ဖြစ်သည်။ အပြီးသတ်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သော McCuaig သည် ASC အားသူ၏အရေးအပါဆုံး၊ ASC Master Classes မြောက်မြားစွာကိုသင်ကြားပေးခြင်းအပြင်အသင်းသို့နှစ်ခြင်းခံခြင်းကော်မတီ၏ဥက္ကchairman္ဌအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်းလည်းပါဝင်သည်။
အဆိုပါ 34 နှင့် ပတ်သက်. သိရှိလိုပါကth ASC ဆုပေးပွဲ, အလည်အပတ်ခရီး www.theasc.com သို့မဟုတ် 323-969-4333 ခေါ်ဆိုပါ။
နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံတွင် AMIA ကပေးအပ်မည့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆုများ - နိုဝင်ဘာလ 13, 2019
2019 Camerimage ရှိ Panavision ၏အဆုံးမှအဆုံးသို့ဂေဟစနစ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ - အောက်တိုဘာလ 30, 2019
တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက် 2019 HPA ဆုများတရားသူကြီးများဆုချီးမြှင့်ခံရသူကို“ သူတို့မအိုရကြဘူး” - အောက်တိုဘာလ 25, 2019
ရိုက်ကူးရေး၏ American Society ASC ASC ဆုပေးပွဲ ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor တစ်သက်တာအောင်မြင်မှု လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-10-23
ယခင်: Post ကိုထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာ
နောက်တစ်ခု: Matrox ယခုမြေပြင်အနေအထားအရ QuadHead2Go မျိုးဆက်သစ်ဗီဒီယိုနံရံများအတွက် Multi-Monitor Controller များတင်ပို့သည်။